Fitaterana: hiakatra 800 Ar ny saran-dalana, Ivato-Vassacos | NewsMada
Fitaterana: hiakatra 800 Ar ny saran-dalana, Ivato-Vassacos
Tapakevitra ny mpitatitra mampitohy an’Ivato amin’i Vassacos fa hiakatra 800 Ar ny saran-dalana. Ho hentitra amin’ny fampanarahan-dalàna ny kaoperativa sy ny ATT raha ny fampanantenan’izy ireo. Miandry ny fanatsarana ny kalitaon’ny asa ny mpandeha.
Efa hita any anatin’ny taxi-be Ivato, nanomboka omaly, ny peta-drindrina mampiomana ny mpandeha fa hiakatra 800 Ar ny saran-dalana ato ho ato. Nanaitra ny mpandeha izany satria efa ho avo roa heny ny fiakarana.
Nitondra fanazavana ny filohan’ny kaoperativa Kofiama fa efa ela ny zotra mampitohy an’Ivato no tsy nampiakatra saran-dalana. 14 km ny lalan’ny tax-ibe, miampy ny fitohanan’ny fiara kanefa mbola 500 Ar ny saran-dalana. Ny zotra sasany anefa eo Ambohimanarina mankeo Analakely (7km) 500 Ar ihany koa.
Manoloana ny fiakaran’ny solika tsy misy fetra sy ny halafon’ny kojakojan’ny fiara, mahatsiaro ho maty antoka ny mpitatitra ka tonga amin’izao fampiakarana saran-dalana izao.
Milaza ny ho hentitra amin’ny fampanarahan-dalàna ny kaoperativa miaraka amin’ny ATT ka tsy hilefitra amin’ny hadalan’ny mpamily sy ny mpanampy azy.
Marihina fa anisan’ny zotra mampitaraina ny mpandeha betsaka indrindra ity zotra mampitohy an’Ivato amin’i Vassacos ity. Tsy refesi-mandidy ny mpamily ary manao loham-boto mihitsy ny sasany.
Tsy misy ny fanajana ny mpandeha. Mihodina an-dalana, hatreo Ambohibao, na hatreo Andranomena ihany ny ankamaroan’izy ireo dia miverina. Ny sasany hatreo 67 ha fa tsy tonga any Vassacos akory. Manginy fotsiny ny vava ratsin’ny mpamily sy ny mpanampy azy mamingavinga ireo mpandeha. Ny sasany aza mahasahy manompa ireo tompon’andraikitry ny fandaminana ny fifamoivoizana ao Ivato mihitsy.
Efa nisy ny andraikitra noraisin’ny kaominina Ivato tamin’ny fanasaziana ireo taxi-be tsy rafesi-mandidy. Matetika anefa misy ny tsindry hazolena avy amin’ireo tompon’ny fiara, toy ireo be galona sy mpitsara ary olona ambony ka mandemy ny fampanarahan-dalàna ary mampanjaka ny tsy maty manota.
Vao fehezin’ny lalàna kely ireo mpitatitra dia manao fitokonana, manala ny takelaka ary tsy mety hitondra olona. Miraviravy tanana ny tompon’andraikitra manoloana izany. Tsy mety ho voafehy ireo mpitatitra.
Anisan’ny zotra gaboraraka ny zotran’Ivato. Manoloana ny fiakaran’ny saran-dalana, mahatsiaro ho tsy manana hitarainana ireo mpandeha. Tsy maintsy mandoa ny 800 Ar satria tsy vita dia an-tongotra ny halaviran-dalana, na ho an’ny mpiasa, na ho an’ny mpianatra.
Mitaky ny fanarahan-dalàna feno kosa anefa nympandeha manoloana izao fiakaran’ny saran-dalana izao. Tokony hajaina ny mpandeha, tsy mihodina an-dalana, tsara kalitao ny fiara, voarindra ny fiara mitatitra ary tsy tokony hampijaly ny taxi-be rehefa faran’ny herinandro…..